Daawo gunaanadkii shirka wadatashiga Somalia ee soo gabagabooyey+Warbixin – SBC
Daawo gunaanadkii shirka wadatashiga Somalia ee soo gabagabooyey+Warbixin
Shirka wada tashiga Arrimaha Soomaaliya ayaa goor dhow oo galabta ah la soo gaba gabeeyay, iyadoo gaba gabadii shirka uu khudbad ka jeediyay Madaxweynaha Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed.
Dhamaan xubnaha ergooyinka, Madaxda Dowladda iyo Wakiilada Beesha Caalamka ayaa shir jaraa’id oo wada jir ah qabtay, iyagoo goobta ku saxiixay war murtiyeedka shirka laga soo saaray.
Madaxweyne Shariif ayaa ka hadlay qodobo dhowr ah oo ay ka mid ahaayeen Xaaladaha abaaraha, Amniga iyo sidii Beesha Caalamka ay u dar dar gelin laheyd taageerdeeda Soomaaliya.
Inkastoo shir gaar ah oo ay lahaayeen Madaxda Dowladda iyo Wakiilada Beesha Caalamka uu hogaaminayay Agoustine Mahiga looga hadlay caqabadii markii hore soo wajahay gunaanadka shirka ayaa hadana waxaa shirka laga sheegay in la isku afgartay war murtiyeedkii la soo saaray.
Ergeyga Qaramada Midoobey Arrimaha Soomaaliya Agoustine Mahiga ayaa khudbad ka jeediyay, waxaa uu uga mahad celiyay sida ay u dhabar adeegeen ergooyinka shirka ka qeyb galay mudadii saddexda maalmood.
Afarta qodob ee looga dooday shirka ee kala ahaa Ammaanka, Dib u Heshiisiinta, Dastuurka iyo Dowlad wanaaga ay ahaayeen kuwo gudiyada loo xilsaaray ka soo tala bixiyeen, iyagoo soo bandhigay qodobo dhowr ah oo ay ka soo doodeen.
Qodobada ay ka mid ahaayeen Ammaanka, Dib u Heshiisiinta, Dastuurka iyo Dowladda wanaaga oo ahaa kuwo afarta gudi ay si weyn uga doodeen, ayaa hadana marka loo eego isu soo dhowaanshahooda waxay isaga raaceen dhinaca Dastuurka, oo gebi ahaanba ay sheegeen in meesha laga saaro qabyo qoraalka dastuurka.
Sidoo kale qodobka dhinaca Ammaanka oo isna ahaa mid xasaasi ah ayaa Gudiga u hadlay Ammaanka Mustaf Dhuxulow uu soo jeediyay AMISOM la geeyo Gobolada Puntland iyo Galmudug, sida Galkacyo oo kale oo labada maamul ay degaan sidoo kale tababarada Ciidamada ayuu xusay in laga qeyb geliyo Ciidamada labada dhinac, waxaa uu kaloo sheegay in Gobolada Shabaab la geeyo AMISOM, sida Kismaayo.
Caqabadaha soo wajahay shirka gaba gabadiisa ayaa ahaa mid ka timid dhinaca Puntland kadib markii ay codsadeen in dib u habeynta lagu sameynayo Baarlamaanka habka lagu soo xulayo ay noqoto mid deegaan ama gobol lagu kala xulo ayaa taas waxaa diiday ergooyinka kale.
Ma jirto ilaa iyo hada war murtiyeed rasmi ah oo saxaafada loo qeybiyay, waxaase lagu heshiiyay dhamaan war murtiyeedka shirka laga soo saaray ee afarta gudi ay maalmahan ka munaaqashoonayeen.
Dowladda KMG ayaa waxaa u saxiixay Ra’iisul Wasaaraha, halka Puntland uu u saxiixay Wasiirka Waxbarashada Cabdi Saciid Faarax, sidoo kale dhanka Ahlusuna ayaa waxaa saxiixay Khaliif C/qaadir, halka Galmudug uu wasiirka qorsheynta u saxiixay, Qaramada Midoobey ayaa waxaa u saxiixay Mahiga, iyo dhinacyada kale ee Wakiilada Beesha Caalamka ayaa iyana saxiixay.
Wali ma cada waxyaabaha lagu qeexay war murtiyeedka ka soo baxay shirka, iyadoo ilaa saaka ay muuqdeen kala aragti duwanaan iyo is mari waa xoog leh oo ku aadaneyd arrinta dib u habeynta Baarlamaanka.